Softmedal - Download Software efu, gam akporo egwuregwu APK
Mmemme 3D nku nku pụtara dị ka usoro mmemme ị nwere ike iji mee atụmatụ 3D na kọmputa gị. Ekele dịrị ma nefu ma mepee, usoro mmemme ahụ, nke ị nwere ike ịmalite iji nenweghị nsogbu na ozugbo ibudata ya, gụnyere ngwaọrụ niile enwere ike iji maka ezigbo 3D. Ọ bụrụ na anyị lelee ngwaọrụ niile dị na mmemme ahụ; Bugharịa, nha, bepụ, gbasaa...
Blender bu ihe nlere 3D nefu, mmeghari, ihe ngosi, mkparita uka mkparita uka na ngwanrọ software meputara dika ihe mepere emepe. Sọftụwia ọzọ a, nke akwadoro na sistemụ arụmọrụ niile ma nye ebe enwere nefu maka ụdị ndị ọrụ niile na ikikere GNU, bụ ngwa ọrụ ị nwere ike iji na obere oge, nke ị nwere ike iji mee ezigbo ụdị akụkụ atọ, yana...
SetCAD bụ teknụzụ ịse ihe omume ị nwere ike iji mee na teknụzụ 2D na 3D. SetCAD, nke na-enye ndị dị ọhụrụ nka na ụzụ ihe osise ya na ọrụ ya na ọrụ iwu ha na English, ma na-enye gị ohere idozi iwu ọ na-eme nụzọ dị mfe karị, na-enye ọtụtụ ndozi na eserese 2D na 3D nihi na ejiri ya na OpenGL ije. SetCAD, nke na-enyekwa ohere...
Fotowall bụ ezigbo onye nchịkọta akụkọ ihe oyiyi na-apụta na koodu mmalite ya na iji ya eme ihe dị mfe. Na mmemme ị nwere ike iji dịka ịchọrọ, ịnwere ike idezi onyonyo gị kpamkpam. Fotowall, ngwa di mfe nke ndi nile ihe onyonyo kwesiri igbalita, dikwa uche anyi nebe odi nfe. Nwere ike ịmepụta ọrụ dị mma na mmemme ahụ, nke na-enye gị...
TSR Watermark Image Software bụ ngwa eji akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ chọrọ ịmịpụta faịlụ onyonyo ha. Usoro ihe omume nwere ikike ịgbakwunye watermarks ma dị ka ederede na dị ka ihe oyiyi. Ọ gụnyere ụfọdụ mmetụta. Enwere ike ịrụ ọrụ achọrọ na ntọala Watermark nghọta na-enweghị ịmanye onye ọrụ. Ọ bụrụ nịchọghị ịme ihe mmemme eserese na ihe...
HyperSnap, ihe dị mfe iji na ngwanrọ ngwanrọ ngwanrọ, na-enye gị ohere idezi foto ndị enwetara site na nchịkọta akụkọ ya. Site na mmemme a, enwere ike ịchekwa onyonyo zuru oke site na egwuregwu ndị eji teknụzụ DirectX / Direct3D kwadebere. Site na HyperSnap, nke bara uru na nkwupụta, ọzụzụ na nkwalite, enwere ike ịchekwa ederede site na...
Na Face Off Max, ị nwere ike ịmepụta foto na-atọ ọchị ma na-atọ ụtọ site na itinye ihu gị na ahụ ọ bụla edebanyere na mmemme ahụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịbawanye ihe ọchị site na ịkekọrịta foto ndị a na ndị ị hụrụ nanya. Ekele maka ndebiri dị njikere na mmemme ahụ, ị ​​nwere ike ịtụgharị onwe gị gaa zombie ma ọ bụ nwee foto...
Adobe SpeedGrade Creative Suite (CS) 6 bụ ngwa eserese agba maka ndị editọ, ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-ese ihe nkiri na-ahụ anya, agba. A na-ewere ọrụ okike rụọ ọrụ na ọkwa ọzọ nọkwa ọkachamara na sọftụwia, nke na-enye ngwa ọrụ eji arụ ọrụ nke na-eme ka arịrịọ vidio dijitalụ na nke mma. Ihe omume agba agba agba agba agba agba agba...
Agbanyeghị na agba Quantizer bụ obere sọftụwia, ọ nwere ike ibuli onyonyo gị nke ọma. Nihi ụcha Quantizer, enwere ike ime ihe kachasị mma na foto. Ọ bụ ezie na ọ bụ mmemme emere maka ndị ọrụ toro eto, interface ya dị mfe iji na-arịọ ndị ọrụ niile. Ọ na-emekwa ka arụmọrụ dị mfe dịka mkpakọ png na jpg mkpakọ maka onye ọ bụla. Nwere...
Adobe Stock bụ ọrụ na-enye ndị nrụpụta na azụmaahịa ọtụtụ nde foto dị elu na enweghị eze, vidiyo, ihe atụ, eserese vector, akụ 3D, yana ndebiri iji rụọ ọrụ ha niile. Nwere ike ịzụta Adobe Stock dị ka ndenye aha ọtụtụ akụ. Budata Adobe Stock Adobe Stock na-enye ndị na-emepụta ihe, ndị na-ere ahịa, ndị ọkachamara nihe nkiri vidiyo, na...
Rush Rally 3 bụ ihe kachasị ebudatara ma kpọọ egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu na mkpanaka. M ukwuu nwere ike ikwu na ọ bụrụ na ị na-achọ a console àgwà rally racing egwuregwu. Ngosiputa ihe ngosi kwesiri ntukwasi obi na igwe eji eme ka ndi mmadu megharia dika ndi ozo, egwu ndi na adighi ka eziokwu, choro ugboala di iche, nbibi ugbo ala nke...
Chọrọ igwu egwu ezi uche ọduọ egwuregwu na mobile nelu ikpo okwu? Ọ bụrụ na azịza gị bụ Ee, m na-atụ aro ka ị kpọọ Torque Drift. Na Torque Drift, nke dị netiti egwuregwu ịgba ọsọ na ikpo okwu mkpanaka, anyị ga-enwe ohere ịnweta ụgbọ ala ịgba ọsọ dị iche iche nokporo ụzọ ndị a na-emebu. A ọdịnaya na ọgaranya ọdịnaya ga-echere anyị na...
Họrọ ugbo ala nke ugbo ala di iche iche dika Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen ma were ike gi merie ndi iro gi. A na-enwe onye mmegide na ntanetị na-echere gị nokporo ámá ma ọ bụ egwu na egwuregwu a. Malite site na ịgba ọsọ site na 1/8 ruo otu kilomita, wuo otu, merie asọmpi...
Takedown Fast & Furious bụ otu nime egwuregwu mkpanaka maka ndị na-egwu ihe nkiri ngwa ngwa ngwa ngwa. Negwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala nịntanetị, ebe a na-enye ụgbọala ndị dị na fim ahụ ikike, ị na-agbasi mbọ ike ka igodo gị pụọ nọsọ ahụ na inweta igodo ahụ. Na-egosi ikike gị niile na ọsọ pụrụ iche na-ejedebe oge emere na mpaghara...
Beach Buggy Racing 2 bụ mbipute a na-agbanwe agbanwe nke Beach Buggy Racing, egwuregwu ịgba ọsọ 1 kart nwere ihe karịrị 70 nde ndị egwuregwu mkpanaka, yana usoro egwuregwu ọhụrụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala, egwu, ndị na-akwalite na ndị ọzọ. Jikere iburu nọsọ ntanetị pụrụ iche na ebe ndị mara mma dịka pyramid Egypt, nnukwu ụlọ jupụtara na dragon,...
NASCAR Heat Mobile bụ naanị egwuregwu NASCAR nyere ikikere nke nwere ụgbọ ala NASCAR ikikere na ezigbo ndị ọkwọ ụgbọ ala NASCAR. Negwuregwu ịgba ọsọ, nke dị maka nbudata nefu na ikpo okwu gam akporo, ị nwere ike ịmepụta mpaghara ofufe gị yana sonye na agbụrụ ndị adrenaline jupụtara na egwu egwu. NASCAR Heat Mobile, naanị egwuregwu...
Mobile game Onye Mmepụta Gameloft, mara maka ya ịga nke ọma ọduọ egwuregwu ndị dị otú ahụ dị ka Asphalt 8, wepụtara ọzọ ọduọ egwuregwu GT Racing 2 maka kọmputa na mbadamba iji Windows 8.1 sistemụ, mgbe gam akporo na iOS smartphones na mbadamba. GT Racing 2, nke ị nwere ike igwu egwu nefu, bụ egwuregwu dị iche na Asphalt 8 nke Gameloft...
Top Speed ​​2: Drag Rivals & Nitro Racing bụ ihe kachasị ọhụrụ na Top Speed, otu nime egwuregwu egwuregwu kachasị amasị ndị na-ahụ egwuregwu ịgba ọsọ na ịdọrọ ịgba ọsọ. Ọhụrụ multiplayer mode e kpamkpam ọhụrụ ọhụrụ nke abụọ kasị ebudatara online ụgbọ ala ọduọ egwuregwu na gam akporo nelu ikpo okwu. Dị ka ọ dị na mbụ, ọtụtụ ụdị site...
Dirt Trackin 2 bụ egwuregwu ịgba ọsọ ị nwere ike igwu na ngwaọrụ mkpanaka gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Can nwere ike ịnweta ezigbo ikuku ịgba ọsọ na Dirt Trackin 2, nke m nwere ike ịkọwa dịka ụdị egwuregwu ịgba ọsọ ebe ị nwere ike ijikwa ụgbọ ala nwere nnukwu ịnyịnya agha wee banye ikuku na-akpali akpali. Nwere ike ịnwe nnukwu...
PAKO 2 bụ egwuregwu mkpanaka m chere na ndị na-enwe mmasị ịgba ọsọ ịgba ọsọ egwuregwu ga-enwe ọ .ụ. Na usoro ohuru nke usoro a ma ama, nke ruru nde nbudata na ntanetị gam akporo, anyị na-ahụ ndị uwe ojii na-eme ihe ike karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Ekwadoro m egwuregwu ịgba ọsọ nke arcade nke na - etinye gị na ndị uwe ojii na - agba ọsọ na -...
Horizon Chase bụ ihe ngosi gam akporo nke egwuregwu egwuregwu mkpanaka a na-egosipụta nke ọma wepụtara maka ngwaọrụ iOS. Horizon Chase, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, nadịghị ka ụdị iOS nke egwuregwu ahụ, nwere usoro nke na-echetara anyị ụdị egwuregwu ịgba ọsọ...
Ezigbo Racing 3 bụ a mobile ọduọ egwuregwu na bụ nnọọ ihe ịga nke ọma ma anya na na usoro nke gameplay. Na Ezigbo Racing 3, egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala ị nwere ike igwu na smartphones gị na mbadamba site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, ndị egwuregwu nwere ike isonye na agbụrụ na-akpali akpali ma nwalee nka ha na ụdị egwuregwu dị iche...
CarX Drift Racing 2 bụ ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na usoro CarX, nke kachasị ebudatara ma kpọọ egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu na mkpanaka. Negwuregwu egwuregwu ịgba ọsọ ọhụrụ, nke nwere ihe karịrị 50 nde ndị egwuregwu nụwa niile, nkọwa niile dị egwu sitere na eserese gaa na ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu ka ewerela na ọkwa ọzọ na ụdị...
Mario Kart Tour adọta uche dị ka a ohuru mobile edinam egwuregwu na ị nwere ike igwu na gị mobile ngwaọrụ na gam akporo sistemụ. Mario Kart Tour, egwuregwu kachasị ọhụrụ nke egwuregwu Super Mario, bụ egwuregwu ebe ị nwere ike ịsọ mpi nakụkụ dị iche iche nke ụwa, gosipụta nka gị ma nwee nnukwu oge notu oge ahụ. Egwuregwu ahụ, nke...
F1 Mobile Racing bụ usoro kacha mma Formula 1 na-egwu egwuregwu na ekwentị gam akporo. Na-asọmpi ndị na-anụ ọkụ nụkpụrụ Formula 1 si nakụkụ ụwa niile na egwuregwu mkpanaka egwuregwu nke FIA ​​Formula 1 World Championship. Họrọ site na ndị ọrụ gọọmentị 10 F1 ma gbaa ọsọ iji maa ndị gị aka! Formula 1 racing game F1 Mobile Racing, wepụtara...
Asphalt Xtreme bụ Gameloft si ọtụtụ egwuregwu ọduọ egwuregwu na mma visuals na-ekere òkè gameplay. Na egwuregwu ịgba ọsọ nokporo ụzọ, nke dị maka nbudata nefu na ikpo okwu Windows mgbe nyiwe gam akporo na iOS, anyị na-abanye nime agbụrụ site na ịhọrọ netiti ụdị ụgbọ ala 7. Jikere maka agbụrụ siri ike ebe ike kachasị nọrọ na egwu ahụ. Dị...
Enwere ike ịchọta IP nonwe ya site na IPntanetị, ya mere ọ dịkwuo nchebe karịa adreesị IP ọha. Atụmatụ: Nyochaa netwọkụ niile na sekọnd Chọta ngwaọrụ netwọọkụchọta HTTP, HTTPS, FTP na nchekwa folda Imechi kọmputa mmechi Ọkacha mmasị ọkachasị maka njikwa netwọọdụ dị mfe Bubata dị ka HTML ma ọ bụ CSVEasy na interface enyi na enyi...
Trillian, otu sọftụwia zuru oke ebe ị nwere ike ijikwa ọrụ izi ozi ngwa ngwa yana profaịlụ netwọkụ mmekọrịta sitere na otu mpaghara, bụ nhọrọ pụrụ iche nke na-arụ ọrụ dakọtara na nyiwe Windows, Mac, Web na Mobile. Usoro ihe omume ahụ, nke anyị maara dị ka Trillian Astra na nsụgharị ndị gara aga, malitere iji aha Trillian na nsụgharị...
Mozilla Thunderbird, onye na - azụ ahịa ozi ngwa ngwa, nke bara uru ma baa uru, na - abịawanye oke oke na atụmatụ ya maka ụdị ya ọhụụ Ihe kachasị dị egwu nke Mozilla Thunderbird, nke na-abịa na ihe ọhụụ na nhazi ya, arụmọrụ ya, ndakọrịta weebụ, yana ịdị mfe nke iji, bụ na ọ na-emepe emepe taabụ, otu nime atụmatụ ndị kachasị ewu ewu nke...
Open Broadcaster Software, ma ọ bụ OBS na nkenke, bụ sọftụwia na - eweta nefu na - enyere ndị ọrụ aka ịgbasa na ịntanetị. Nịbụ onye ọrụ mmeghe na-emeghe, OBS Studio na-enye ndị ọrụ ohere ịdekọ vidiyo ma gbasaa na ntanetị. Site nusoro ihe omume ahụ, ịnwere ike ịgbasa ihe oyiyi na kọmputa gị na ịntanetị, gbasaa egwuregwu ahụ ndụ ma...
Enwere ike ịkọwa Twitch dị ka ngwa desktọọpụ Twitch na-arụ ọrụ na-achịkọta iyi niile kachasị amasị gị, ndị enyi na egwuregwu. Ngwa ọrụ Desktọpụ Twitch, nke bụ sọftụwia ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam na kọmputa gị, bụ ngwa bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile Twitch na ntanetị nke ya kama iji ihe nchọgharị ịntanetị gị. Ngwa ọrụ...
SlimBrowser nwere usoro dị mfe ma e jiri ya na ihe nchọgharị ịntanetị ndị ọzọ. Notu aka ahụ, SlimBrowser, nke nwere ntakịrị karịa ihe nchọgharị ịntanetị ndị ọzọ, na-enye gị ohere ịchọgharị na ịntanetị na ngwa ngwa na nchekwa. SlimBrowser meghere ngwa ngwa, yana elele nke ịbụ mmemme na-arụ ọrụ nke ọma na Windows. SlimBrowser, nke...
TorrentRover bụ a free omume na-azọpụta gị nsogbu nke na-achọ nchebe iyi faịlụ na-enye ohere nbudata site na-ewu ewu iyi saịtị. Mmemme a, nke na-achịkọta ọdịnaya sitere na isi mmalite dịka KickAssTorrents, ThePirateBay, IsoHunt, ExtraTorrent, bụ otu nime ihe kachasị mma netiti mmemme iyi. Dị ka ị maara, iyi saịtị na-ibudata fim na TV...
Nchịkọta CCleaner bụ ihe nchọgharị weebụ nke nwere nchebe na ihe nzuzo iji chebe gị na ịntanetị. Ọ na-abịa na ngwaọrụ niile ịchọrọ iji jikwaa nzuzo gị nịntanetị, njirimara na data nkeonwe. Nwere ike ibudata ma nwalee Nchọgharị CCleaner, ihe nchọgharị ngwa ngwa, nkeonwe na nchedo maka Windows, site naka ndị mmepe nke CCleaner nefu. ...
Enwere ike ịkọwa Adị mkpịsị aka dị ka egwuregwu ịgba ọsọ mkpanaka nke ị nwere ike igwu ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ ntụrụndụ. Egwuregwu na-akpali akpali ma na-akpali akpali na-echere anyị na Thumb Drift, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị na...
GRID Autosport bụ egwuregwu kachasị ọhụrụ na usoro GRID nke Codemaster mepụtara, amaara maka ahụmịhe ya na egwuregwu ịgba ọsọ. Na GRID Autosport, nke so netiti ihe atụ kachasị nke ọma nọsọ egwuregwu a na-agba ọsọ, ndị egwuregwu na-abanye nọrụ ịgba ọsọ nke onwe ha ma na-esite n ụkwụ na-aga niru nọkwa ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị na...
Mee ụlọ ụgbọ ala gị na nrọ gị na Overdrive City! Nka ọtụtụ ugbo ala, na-anakọta a dịgasị iche iche nke iconic ụgbọala na-emikpu onwe gị na mpi na ọduọ ọrụ mode. Gbanwee obodo gị Tycoon ka ọ bụrụ azụmaahịa azụmaahịa Motorsport zuru ụwa ọnụ. Mepụta ụdị ụgbọ ala 50 site na Porsche, Ford, BMW na ụdị ndị ọzọ. Na-eju onye ọ bụla nọ nobodo gị...
CSR Racing 2 bụ nke kacha mma egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu na ikpo okwu gam akporo, ma nke anya ma na usoro nke egwuregwu. Anyị na-anwa igosi na anyị bụ ndị kacha mma na-agba ọsọ nobodo ahụ na egwuregwu ahụ, nke gụnyere ihe karịrị 50 ikikere na nụzọ magburu onwe ya gbanwere agbanwee ọsọ ọsọ. Nezie, ọ dịghị mfe iji nke kacha mma sọọ mpi n...
Real Racing 3 bụ egwuregwu ịgba ọsọ nke ndị injinia EA kwadebere na ọ bụ egwuregwu nke atọ na usoro Real Racing. Maka ụdị a, nke akwadoro maka ndị ọrụ gam akporo, anyị ga-ebu ụzọ kwuo na mgbe ebudatara egwuregwu ahụ, a ga-ebudata nnukwu faịlụ echichi site na egwuregwu ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka 6 MB na ụlọ ahịa ahụ, egwuregwu ahụ na-ewe...
Crazy for Speed ​​2 bụ otu nime egwuregwu kacha mma ịnya ụgbọ ala nokpuru 100MB na ekwentị mkpanaaka. Ọ bụ nnukwu egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala nke na-enye ọnọdụ ọrụ miri emi, nke ị na-agba ọsọ megide okporo ụzọ, na-enyocha ule ọkwọ ụgbọ ala, na-egwu egwu egwu na ụgbọ ala. Ọzọkwa, ọ bụ nefu iji budata ma kpọọ! Crazy for Speed ​​2....
Assoluto Racing bụ otu netiti ụgbọ ala ọduọ egwuregwu na elu-ọgwụgwụ ndịna ị nwere ike igwu free na gị gam akporo ngwaọrụ. E nwere ụzọ egwuregwu atọ dị iche iche na egwuregwu ahụ, nke nwere usoro njikwa ahaziri nke na-enye ohere ịme egwuregwu dị mma na mbadamba na ekwentị. Inwe ihe karịrị 10 ikikere ụgbọ ala gụnyere Peugeot RCZ Limited...
Nemezis: Mysterious Journey III bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya ebe ndị njem abụọ, Bogard na Amia, hụrụ onwe ha nọtụtụ ihe omimi. Gbanwee ihe mgbagwoju anya ma kpughee akụkọ na ịgaghị enwe ike iguzo ruo ọgwụgwụ. Download Nemesis: Ozoemena Nsugbe Njem ma chọpụta: ihe okike mara mma nke ukwuu, nke nwere oke osisi, nke nwere ọtụtụ...
F1 2021 bụ usoro ịgba ọsọ Formula 1 nke Codemasters mepụtara. F1 2021 Budata Akụkọ ọ bụla nwere mmalite na F1 2021, egwuregwu egwuregwu nke 2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. Kpoo ihe ohuru ohuru nke F1 2021, tinyere ihe omuma banyere obi uto Braking Point, onye oru abuo abuo, ma rute nso na isi awọ ya na Real Season Start. Were...
Nna-ukwu Grịl bụ nri na-arụ ọrụ na ịme anwansị ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụ egwuregwu dị egwu ị nwere ike igwu iji sie nri dị ụtọ ma nwee obi ụtọ banyere onwe gị. Gbalịsie ike imeju ndị ahịa gị site na isi nri na oge na usoro ziri ezi. O nwekwara ike ịbụ gị ka ọ dị gị ka Nusret. Reveal na-ekpughe nkà gị na Master...
Cafe Master egwuregwu bụ egwuregwu egwuregwu ịme egwuregwu ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gị yana sistemụ arụmọrụ gam akporo. Jikere ịghọ onye nwe ụlọ cafe. Nke a dị mfe ma na-atọ ụtọ karịa ịdị adị. Ọ bụrụ nitinye usoro egosiri gị nke ọma, ị nwere ike ịmepụta ihe oriri na ihe ọ drinksụ legendụ a ma ama. Nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na nnukwu...
Fireworks nnukwu ụlọ egwuregwu bụ ịme anwansị egwuregwu na ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Anyị na-eji oke mmasị na-ele ihe ngosi ọkụ ọkụ mgbe niile. Ọmarịcha oriri a na-ahụ anya nke ijikọ ọtụtụ cartridges nwere agba kwesịrị ile anya. Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ịtụfu onwe gị nihu ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị gị...
Ee, uwe ahụ! Pụtara dị ka egwuregwu ịme anwansị nke ị nwere ike igwu na ekwentị mkpanaaka gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ee, uwe ahụ! Are na-emebe uwe na egwuregwu ahụ. E nwere ikuku pụrụ iche na egwuregwu ahụ, nke na-enye ohere iji agba na imepụta uwe mara mma. Egwuregwu ahụ, nke na-adọta uche na mmetụta riri ahụ, nwere njikwa dị...
Galactic Colonies bụ egwuregwu gbasara ịgagharị ohere na iwulite ngalaba. Nyochaa usoro mbara igwe na-emepụta usoro yana ọtụtụ puku mbara ala. Obodo ọ bụla na-amalite obere. Malite site na ịnye ndị nwe ụlọ ebe obibi na nri tupu iji akụ sitere na mbara ụwa. Mee ụlọ mmepụta ihe na imepụta ngwaahịa ọgbara ọhụrụ iji bulie mpaghara gị....